မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း - မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
မာရှယ်ကျွန်းစုများတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ခြင်း။
Deticated အကောင့် Manager ကို
စင်ကာပူနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်
ထုတ်လုပ်သူသန်းပေါင်းများစွာသည်မာရှယ်ကျွန်းစုများနှင့် ၁၀၉ နိုင်ငံများအတွက်ဖောက်သည်များအားအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကြံဥာဏ်များပေးသည်။
မာရှယ်ကျွန်းများရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းများမှကမ်းလွန်ဒေသများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်မာရှယ်ကျွန်းများရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
မာရှယ်ကျွန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ။
မာရှယ်ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်း၌ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
မာရှယ်ကျွန်းနှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ နိုင်ငံတို့နှင့်အတူမာရှယ်ကျွန်းနှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေရှာမှုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုဒ်နံပါတ်၊ မာရှယ်ကျွန်းများအတွက် CRM ဖြေရှင်းမှုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံသို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိသမ္မတနိုင်ငံ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုသည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အရှေ့ဘက်အစွန်ဆုံးကျွန်းများထဲမှမိုက်ခရိုနီးရှားတွင်ပါဝင်သည်။ သံကြိုးများသည် ၁၂၅ မိုင် (ကီလိုမီတာ ၂၀၀) အကွာတွင်ရှိပြီးအနောက်တောင်ဘက်မိုင် ၈၀၀ ခန့်တွင်အရှေ့တောင်ဖက်သို့ကျယ်ပြန့်သည်။ အဆိုပါ Marshalls ၏ဒေသခံတစ် ဦး ချင်းစီ, မာရှယ်, Micronesians ဖြစ်ကြသည်။ လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံး atolls များမှာ Majuro နှင့် Kwajalein, US ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုအကွာအဝေးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည်; အတူတူသူတို့နိုင်ငံ၏ပြည့်စုံလူ ဦး ရေရဲ့လေးပုံသုံးပုံနီးပါးရှိသည်။
ကျန်ရှိသောလူ ဦး ရေမှာမြို့ပြဒေသနှစ်ခုမှပြင်ပကျွန်းများရှိသမားရိုးကျမြို့များတွင်နေထိုင်သည်။ သမ္မတနိုင်ငံ၏အဓိကအမြတ်အစွန်းများမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှလွတ်လပ်သောအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် Kwajalein ရှိမြေယာများငှားရမ်းခြင်းနှင့်မြေယာငှားရမ်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Majuro နှင့် Kwajalein နှစ်ခုလုံးရှိစီးပွားရေးနှင့်မျက်မှောက်ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုတို့သည်မြို့ပြဒေသနှစ်ခုသို့လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုဆွဲဆောင်သောသံလိုက်များအဖြစ်ဖြည့်သည်။
ပြင်ပကျွန်းများတွင်သယံဇာတစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ဝက်နှင့်ကြက်မွေးမြူခြင်းတို့သည်အဓိကဘဏ္financialာရေးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ အုန်းသီး၊ ပန်ဒနပ်စ်၊ ပေါင်မုန့်နှင့်တာရိုတို့သည်အဓိကစားနပ်ရိက္ခာသီးနှံများဖြစ်သည်။ ကြေးနီထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ပြင်ပကျွန်းများအတွက်အဓိက ၀ င်ငွေဖြစ်သည်။ အဓိကသွင်းကုန်မှာအာဟာရဖြစ်သည်။ အခြားသိသာသောသွင်းကုန်များမှာယူအက်စ်၊ ဂျပန်နှင့်သြစတြေးလျမှယန္တရားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊
မာရှယ်ကျွန်းစုများ၏တည်ငြိမ်သောငွေကြေးနှင့်နိုင်ငံရေးမူဘောင်များသည်ပင်လယ်ရေပိုမိုခိုင်မာစေရန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကောင်းသည့်ဥပဒေများနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်အမြတ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်စီးပွားရေးသမားများကိုတွန်းအားပေးသည် အမှန်တကယ်အားဖြင့်မာရှယ်ကျွန်းစုသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်၏ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်အရပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အကျိုးတူအဖွဲ့အစည်းများတည်ထောင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ မာရှယ်ကျွန်းများပင်လယ်ရေကြောင်းထင်မြင်ချက်များအတွက်အကြီးမားဆုံးသောလှုံ့ဆော်မှုမှာမည်သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစရိတ်၊ ကော်ပိုရေးရှင်းအကျိုးအမြတ်စရိတ်၊ ထိန်းသိမ်းထားမှု၊ အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအဖွဲ့အစည်းအများစုသည်မာရှယ်ကျွန်းစုများအတွင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုက်ရိုက်မညွှန်ကြားသောကြောင့်သူတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်များသည် ၁၀၀% အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ မာရှယ်ကျွန်းစုအဖွဲ့အစည်းအားငွေကြေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာစည်းရုံးခြင်းဖြင့်အခကြေးငွေကိုအမှန်တကယ်ကန့်သတ်နိုင်သည်။
မာရှယ်ကျွန်း IBCs က၎င်း၏ရပ်ကွက်မှလွဲ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအဖွဲ့အစည်းများဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၎င်း၏အကြီးအကဲများသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အစည်းအဝေးများကိုကျင်းပပါ
ထုတ်ဖော်မထားသောအဖိုးတန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်, အကြီးအကဲများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ
ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်သည်ဒေသအတွင်းနေထိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ
မာရှယ်ကျွန်းများသည်ပင်လယ်ရေအဖွဲ့အစည်းကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်နိုင်သည့်ဒေသအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှအရင်းအနှီးကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်၊ ပြင်ပမှအကာအကွယ်ပေးမှုကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ ထင်ကြေးပေးသူများ၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
အကြီးအကဲတစ် ဦး တည်းသာလိုအပ်ပြီးဝိသေသတစ်ခုသို့မဟုတ်တရားဝင်တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေနိုင်သည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး တည်းသာလိုအပ်ပြီးဝိသေသလက္ခဏာနှင့်တရားဝင်တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေနိုင်သည်
မာရှယ်ကျွန်းစုများသည်ဘတ်ဂျက်နှင့်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များအတွက်အလားအလာရှိပြီး၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောတိုက်ရိုက်လုပ်ငန်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးအမြော်အမြင်ရှိသူများနှင့်ဘဏ္specialistsာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အဖွဲ့အစည်းကိုစုစည်းရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုလုံခြုံစွာနှင့်လုံခြုံစွာခိုင်မာအောင်စွမ်းရည်ရှိသောကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်သူကသင့်အားကူညီနိုင်သည်။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - မာရှယ်ကျွန်း၊ ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစတင်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်ရန်နှင့်မာရှယ်ကျွန်းများရှိကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ မာရှယ်ကျွန်းရှိရုံးခန်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ virtual နံပါတ်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ လုပ်အားအရင်းအနှီးဘဏ္,ာရေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာဘဏ္financingာရေး၊ လုံ့လဝီရိယရှိရှိနှင့်လိုက်နာမှု၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မာရှယ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကျွန်းစုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုစျေးနှုန်းချိုသာသော၊
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - မာရှယ်ကျွန်းနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မာရှယ်ကျွန်းများမှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။ မာရှယ်ကျွန်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သင်၏အရည်အချင်းပြည့်ဝရန်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကျွမ်းကျင်သည့် ၀ န်ထမ်းများ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိမာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုန်သွယ်ရေးနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိ virtual နံပါတ်များ၊ မာရှယ်ကျွန်းများတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိ CRM Solutions၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုန်သည်များအကောင့်နှင့်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိလည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများမှလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုရှိခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ မာရှယ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ကျွန်းစုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြရန်။
မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ | မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Marshall Islands နဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။ စီးပွားရေးပမာဏအတိုင်းအတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုများတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အဖြေရှာပေးသူများဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း မာရှယ်ကျွန်းစု (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း မာရှယ်ကျွန်းစု (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း မာရှယ်ကျွန်းစု
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း မာရှယ်ကျွန်းစု
ကုန်သည်အကောင့်မာရှယ်ကျွန်းများ / ငွေပေးချေမှုရမည့်နေရာမာရှယ်ကျွန်းများ
မာရှယ်ကျွန်းကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း Marshall Islands
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း (စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာအထိ) ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များကိုကြည့်ပါ။
မာရှယ်ကျွန်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
(ဝန်ထမ်း ၁ ဦး အပြောင်းအလဲ၊ အပိုထပ်ဆောင်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အပါအ ၀ င်)
Notary Publica မှအသိအမှတ်ပြုစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ *
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal မာရှယ်ကျွန်းစု
●နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ဝန်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၁၆၀၀
●မာရှယ်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၁၂၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●မာရှယ်ကျွန်းရှိ International Business Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●မာရှယ်ကျွန်းရှိ International Business Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးရန်
●မာရှယ်ကျွန်းရှိ International Business Company အတွက်သင့်အတွက်သင့်အတွက်စံပြကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းပေးပါသည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာနှင့်အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစတင်ရန်၊ ဒေသရင်းမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးကပ်စေရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မာရှယ်ကျွန်းစုသို့မဟုတ် ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
အမြန် (၃ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်း) - ၀ ဒေါ်လာ
အရေးပေါ် (1 -3အလုပ်လုပ်ရက်) - 200 $
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမာရှယ်ကျွန်းများအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
စိတ်ကြိုက် web site ဒီဇိုင်း (စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာအထိ)
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
a ည့်သည်အဖြစ် Continue
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ မာရှယ်ကျွန်းများတွင်သန်းပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်သူများမှတဆင့်
အကယ်၍ သင်သည်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကမာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မာရှယ်ကျွန်းကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောနှင့်ဘက်မလိုက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည်။ မာရှယ်ကျွန်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်မာရှယ်ကျွန်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းများရှိကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုတဆင့်မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ဖွဲ့စည်းကုမ္ပဏီများသည်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုမာရှယ်ကျွန်းစုတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်၊ သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်မာရှယ်ကျွန်းများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကမာရှယ်ကျွန်းသို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သော လျှောက်ထားချင်တယ် မာရှယ်ကျွန်းနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
မာရှယ်ကျွန်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ မာရှယ်ကျွန်းစု ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် မာရှယ်ကျွန်းစု.
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုမြင့်မားမှုကြောင့်မာရှယ်ကျွန်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူမာရှယ်ကျွန်းများတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ မာရှယ်ကျွန်းများတွင်ဝန်ဆောင်မှုများ။
မာရှယ်ကျွန်းရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုများစွာကိုပေးပြီး၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမာရှယ်ကျွန်းစုများအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ကမ်းလှမ်းသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
မာရှယ်ကျွန်းရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှု / မာရှယ်ကျွန်းရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
မှတ်ချက် *“ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကွဲပြားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။ ”
မာရှယ်ကျွန်းရှိရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
မာရှယ်ကျွန်းရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်ဆောင်းပါးများ / မာရှယ်ကျွန်းရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ။
ဘုံတံဆိပျ (optional ကို) ။
ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်အတွက်ခုတ် (optional ကို) ။
မာရှယ်ကျွန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လက်မှတ် - မာရှယ်ကျွန်းများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ မာရှယ်ကျွန်းရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင် / မာရှယ်ကျွန်းရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ / မာရှယ်ကျွန်းရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ။
မာရှယ်ကျွန်းရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / မာရှယ်ကျွန်းများရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကိုဒါရိုက်တာများ၊ အကျိုးခံစားခွင့်ပိုင်ရှင်များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်ခွင့်ပြုပေးပါ
မှတ်စု* “ ဒီဟာတွေဟာအခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကွာခြားနိုင်တယ်။
လက်မှတ်ရေးထိုးသူ: နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်သင်၏တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်ပြီးလက်မှတ်သည်လျှောက်လွှာပုံစံတွင်ပါ ၀ င်ရမည်။
ဒါရိုက်တာနှင့်ရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏နေထိုင်မှုလိပ်စာကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောအထောက်အထား။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ မာရှယ်ကျွန်းရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ / မာရှယ်ကျွန်းရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ:
နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင် / အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ဒါရိုက်တာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်နိုင်ငံခြားသားများ။
ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ချင်းနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏လူနေအိမ်လိပ်စာတို့၏သက်သေအထောက်အထား - ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေဘာသာပြန်ထားသောမူကွဲသည်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများသည်ရွေးချယ်ထားသည့်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ * တရားစီရင်မှုအနည်းငယ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်သာထုတ်လုပ်သည်။
Million Makers သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်သောလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ကုမ္ပဏီများကိုကူညီသည်။ အားလုံးနီးပါးသည်ငါတို့မှပံ့ပိုးမှုမရသောစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများအနည်းငယ်သာရှိသည်။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: အကယ်၍ သင်သည်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်လိုင်စင်မလိုပဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers ရှိကျွန်ုပ်တို့လိုင်စင်မဲ့လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောမာရှယ်ကျွန်းရှိဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ထီခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများတွင်နိုင်ငံခြားကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္Marshallာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းရှိအခြားအာမခံလုပ်ငန်းများ၊ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိငွေကြေးလဲလှယ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုများတွင်လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ Crytocurrency လိုင်စင်ကိုလိုင်စင်ချပေးရန်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ Forex အကျိုးဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်မည်သည့်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
မာရှယ်ကျွန်းနှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများမာရှယ်ကျွန်းများသို့သာမကကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများမှတဆင့်မာရှယ်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုနှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ ခုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များ၊ Professional CFA၊ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များမှတစ်ဆင့်စာရင်းကိုင်များသည်ကိုယ်ပိုင်အခွန်ထမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးတွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများမှအစုရှယ်ယာအမြောက်အများကိုစီမံခန့်ခွဲသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှု၊ စာနာမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ဖောက်သည်များ။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Hong Kong
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Puerto Rico
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Saint Kitts
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Czech Republic
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း San Marino
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Arkansas ပြည်နယ်
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း New Hampshire
North Carolina မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း North Dakota
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Rhode Island
South Carolina မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း South Dakota
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း West Virginia
ကုမ္ပဏီ Delaware တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
New Hampshire တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ
North Carolina တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ
North Dakota တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ
Rhode Island တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ
ကုမ္ပဏီ Vermont တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများ (သို့) ဘဏ်ကိရိယာအစုံအလင်ကိုဖောက်သည်၏နေရာသို့ပို့ရန်အပိုဝန်ဆောင်ခလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွင်ငွေတောင်းခံလွှာသို့အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအလိုအလျောက်သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၀ ကိုလှည်းထဲသို့အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းထားသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမို၍ စျေးသက်သာနိုင်မည်၊ သင်တို့၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ အခြားသူများထက်အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးနိုင်မည်။ သို့သော်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်မျှော်မှန်းချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ Corporate Services | Majuro အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု
မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်မာရှယ်ကျွန်းများရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မာရှယ်ကျွန်းရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ မာရှယ်ကျွန်းများရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကော်ပိုရိတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊ မာရှယ်ကျွန်းများရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ | Majuro အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
မာရှယ်ကျွန်းစုနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Corporate Bank အကောင့်ဖွင့်ပါ
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုမာရှယ်ကျွန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် မာရှယ်ကျွန်းစု.
မာရှယ်ကျွန်းများတွင် Accounts ကို Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုသင် outsource လုပ်နိုင်သောမာရှယ်ကျွန်းစုတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို မာရှယ်ကျွန်းစု၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီရှယ်ယာများကိုမာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ပေးအပ်သည့်အနေဖြင့်သင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းများတွင်စုဆောင်းမှုကိုသင်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ငှားရမ်းပါ
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ မာရှယ်ကျွန်းနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း"မာရှယ်ကျွန်းစု၌တည်၏
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ မာရှယ်ကျွန်းစု.
တစ်ဦးက Business Start
မာရှယ်ကျွန်းစုများ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်မာရှယ်ကျွန်းကနေ။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိသင့်ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
CRM software ကိုဝယ်ပါ
Virtual Number - မာရှယ်ကျွန်းစုအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအ ၀ င်မာရှယ်ကျွန်းရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ။ မာရှယ်ကျွန်းရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း မာရှယ်ကျွန်းစုမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံမှလျှောက်ထားခြင်း ၁ ခုသာရှိသည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း မာရှယ်ကျွန်းစု မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ပေါင်းစည်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
မာရှယ်ကျွန်းရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မာရှယ်ကျွန်းစုမာရှယ်ကျွန်းရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Marshall ကျွန်းရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
မာရှယ်ကျွန်းစုများရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှု | မာရှယ်ကျွန်းစုများအတွက်စျေးသက်သာအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စတင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်မာရှယ်ကျွန်းများရှိကုမ္ပဏီအမြန်ဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ရှာဖွေနေသည် မာရှယ်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်နေရာကိုထည့်သွင်းရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်မာရှယ်ကျွန်းများတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်၎င်းကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာပြောကြားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနေထိုင်သူများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ International Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကိုမာရှယ်ကျွန်းစုရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းဆွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းဆွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကျွန်းကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
မာရှယ်ကျွန်းစုများရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သည် မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း မာရှယ်ကျွန်းများတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | မာရှယ်ကျွန်းစုများတွင် IC ပါဝင်မှု | မာရှယ်ကျွန်းများတွင် IBC ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း | မာရှယ်ကျွန်းစုများ၌ LLC ပါဝင်မှု မာရှယ်ကျွန်းတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း | မာရှယ်ကျွန်းများတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | မာရှယ်ကျွန်းများတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနေထိုင်သူများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုမာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမာရှယ်ကျွန်းများတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနေထိုင်သူများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုမာရှယ်ကျွန်းတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမာရှယ်ကျွန်းများတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းဆွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းဆွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းဆွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနေထိုင်သူများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ IC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကို၎င်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ ICS ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ရှိမာရှယ်ကျွန်းစုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင် IC ပေါင်းစည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်း IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်း IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်း IC IC ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနေထိုင်သူများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ IBC ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကိုမာရှယ်ကျွန်းစုတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်း IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်း IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်း IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Marshall ကျွန်းကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, မာရှယ်ကျွန်းကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနေထိုင်သူများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကိုမာရှယ်ကျွန်းစုတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းများတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်၊ မာရှယ်ကျွန်းများရှိကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ မာရှယ်ကျွန်းစုများ၌ LLC ပေါင်းစည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများ LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနေထိုင်သူများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုမာရှယ်ကျွန်းတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်မဟုတ်သောပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မာရှယ်ကျွန်းစု၊ ကမ်းလွန်မဟုတ်သောပြည်တွင်းအခြေပြုကော်ပိုရေးရှင်းများမာရှယ်ကျွန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်နေထိုင်သူပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းသားမဟုတ်သောပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းသားမဟုတ်သောပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်နေထိုင်မှုမဟုတ်သောပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်နေထိုင်သူပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများဖြစ်သောမာရှယ်ကျွန်းများတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကိုမာရှယ်ကျွန်းစုတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမာရှယ်ကျွန်းများတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိနေထိုင်သူများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကိုမာရှယ်ကျွန်းစုရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ မာရှယ်ကျွန်းများ၊ ကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီကိုမာရှယ်ကျွန်းများတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်း IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းများကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း မာရှယ်ကျွန်းရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း မာရှယ်ကျွန်းတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်။ | IC ကိုမာရှယ်ကျွန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကို Marshall Islands တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ မာရှယ်ကျွန်းတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ရန် မာရှယ်ကျွန်းတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းကိုမှတ်ပုံတင်ပါ မာရှယ်ကျွန်းများတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် | မာရှယ်ကျွန်းတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအားမာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများကိုလည်းမာရှယ်ကျွန်းစုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသောမြို့များမှာ - Majuro တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Majuro တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Majuro မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Majuro မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Majuro မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Majuro အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များနှင့်မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမြို့များဖြစ်သော Majuro ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များကိုထောက်ပံ့သည် Majuro တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Majuro ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Majuro ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Majuro ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Majuro ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Majuro တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမာရှယ်ကျွန်းများတွင်စျေးအသက်သာဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Majuro၊ Majuro တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Majuro ရှိ Majuro ၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Majuro ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Majuro ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Majuro ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Majuro တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
မာရှယ်ကျွန်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ , Majuro အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်, Majuro အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်, Majuro အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, Majuro အတွက် setup ကုမ္ပဏီ, Majuro အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်, Majuro အတွက်ကုမ္ပဏီများတည်ထောင်, မြို့များ။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ။ Majuro တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီပေါင်းထည့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတ ဦး ဖြစ်ပြီးမာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
မာရှယ်ကျွန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်မာရှယ်ကျွန်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ Majuro တွင်နေထိုင်သူများ၊ Majuro တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Majuro တွင်ရှိသောဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများမာရှယ်ကျွန်းစု | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Majuro
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်မာရှယ်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ မာရှယ်ကျွန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ၊ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျစရိတ်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျမှု။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Majuro တွင်စျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) မာရှယ်ကျွန်းများတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Majuro တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသလား မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း မာရှယ်ကျွန်းတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း မာရှယ်ကျွန်းများတွင် LLC မှတ်ပုံတင် | မာရှယ်ကျွန်းတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC မာရှယ်ကျွန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းပါ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ မာရှယ်ကျွန်းများတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ IC ကိုမာရှယ်ကျွန်းစုတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကိုမာရှယ်ကျွန်းတွင်ထည့်သွင်းပါ မာရှယ်ကျွန်းစုများတွင် Incorporate LLC | မာရှယ်ကျွန်းများတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းကိုထည့်သွင်းပါ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ Incorporate LLC ကုမ္ပဏီ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ | မာရှယ်ကျွန်းစုရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ မာရှယ်ကျွန်းရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်၏မာရှယ်ကျွန်းတွင်သင်၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောပမာဏနှင့်မာရှယ်ကျွန်းများရှိအရည်အသွေးကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အားမာရှယ်ကျွန်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောစာရင်းကိုင်များ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်မာရှယ်ကျွန်းရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
မာဆိုရိုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်မာရှယ်ကျွန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားအားအထူးကူညီပံ့ပိုးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီးမာရှယ်ကျွန်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လိုလျှင်သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
အကယ်၍ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်မာရှယ်ကျွန်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ သို့မဟုတ်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ မာရှယ်ကျွန်းစုသည်မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်သည်၊ Majuro တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Majuro တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Majuro တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Majuro တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Majuro တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်။ Majuro, Majuro အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိဈေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Majuro တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ Atoll- မာရှယ်ကျွန်းစုရှိ Atoll ၏တရားဝင် site ။
မာရှယ်ကျွန်းစု Nuclear တောင်းဆိုမှုခုံရုံး
စီးပွားရေး & စီးပွားရေး
Air Marshall ကျွန်းများ
မာရှယ်ကျွန်းများ - ခရီးသွားလာရေးနှင့် Tour ည့်လမ်းညွှန်များ
မာရှယ်ကျွန်းများ itors ည့်သည်များအာဏာပိုင်
Outrigger မာရှယ်ကျွန်းစုအပန်းဖြေစခန်း- ဟိုတယ်၊ Majuro
အဆိုပါ CocoNET ကြိုးမဲ့
Alele ပြတိုက်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့်အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်
ဘီဘီစီသတင်းနိုင်ငံ - မာရှယ်ကျွန်း
နောက်ခံမှတ်စုများ - မာရှယ်ကျွန်းစု
ပွင့်လင်း Directory ကို: မာရှယ်ကျွန်းစု
World Factbook - မာရှယ်ကျွန်းစု
WADIAH CAPITAL LTD
ဤစာရွက်စာတမ်းအားအခမဲ့ HTML converter ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် ဒီမှာ။ စာရွက်စာတမ်းတည်းဖြတ်မှုအတွက်၎င်းကိုအချိန်တိုင်းအသုံးပြုပါ။
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ငါတို့နောက်လိုက်တယ် FATF စည်းမျဉ်းများ အလွန်တင်းကြပ်စွာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ မာရှယ်ကျွန်းစု အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) မာရှယ်ကျွန်းစုများမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်စက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်မာရှယ်ကျွန်းစု၏ဥပဒေအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ် ဦး ချင်းစီသို့ဖြစ်စေ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုတွင်ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ - အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုန်ကြမ်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများကိုနျူကလီးယားပစ္စည်းများ၊ စက်ယန္တရား၊ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ (s) ကိုထုတ်လုပ်, ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ။
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုမာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုန်စည်ဒိုင်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အငှားမိဘစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်မာရှယ်ကျွန်းစုများမှသို့မဟုတ်မာရှယ်ကျွန်းစုများမှသို့မဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်ကလေးမွေးစားခြင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိသည့်မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုမာရှယ်ကျွန်းစုများမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့မ ၀ င်ရောက်နိုင်ပါ။
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုမာရှယ်ကျွန်းစုများရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုလုပ်ကိုင်သောမာရှယ်ကျွန်းစုရှိသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းပစ္စယများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်သို့မဟုတ်မာရှယ်ကျွန်းစုရှိကုန်သည်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် မာရှယ်ကျွန်းစုတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် မာရှယ်ကျွန်းစု, မာရှယ်ကျွန်းစု ဘဏ်အကောင့်, မာရှယ်ကျွန်းစု ယုံကြည်မှု မာရှယ်ကျွန်းစု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု မာရှယ်ကျွန်းစု။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ မာရှယ်ကျွန်းများအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်စျေးကွက်ပေါက်စျေးထက်ဒေါ်လာ ၄၁၀၀ စျေးသက်သာသည်
ဆက်သွယ်ရန် | ရက်ချိန်း
ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပါ 106 နိုင်ငံများ! ဆက်သွယ်ရန်
စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရန်စျေးကွက်ပေါက်စျေး
နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပေါင်းစည်းသည်
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-marshall-islands/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်သည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-marshall-islands/ မှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-marshall-islands/
Browser သည် WP Rocket / Preload ဖြစ်သည်